စိတ်ကူးပျော်ရာ: အကြီးအကဲမန်နေဂျာတစ်တစ်ယောက်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့အလေ့အကျင့် (၇)မျိုး
အကြီးအကဲမန်နေဂျာတစ်တစ်ယောက်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့အလေ့အကျင့် (၇)မျိုး
- စကားတစ်ခုပြော၊ ကတိတစ်ခုပေးပြီး ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကအကြီးအကဲဖြစ်နေတော့ လက်အောက်ငယ်သားတွေက မလေးမစားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လက်အောက်က၀န်ထမ်းတွေက ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေလျော့နည်းလာတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ.အလုပ်မှာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုလည်းနည်းသထက်နည်းလာနိုင်ပါတယ်။
၂။ လက်အောက်က၀န်ထမ်းတွေကို အများသိအောင် ဒဏ်ပေး အရှက်ရအောင်လုပ်တဲ့ပြောတဲ့အကျင့်
- ဘယ်သူကမှကိုယ်အရှက်ကွဲမှာကိုမလိုလားကြပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက ကိုယ်အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိတာကို လူအများရှေ.များအပြစ်တင်ပြောဆိုပြီး အရှက်ခွဲတာမျိုးကိုဆိုပိုလို.တောင်ကြောက်ကြပါတယ်။ အကြီးအကဲတစ်ယောက်အနေနဲ. ကိုယ့်ဝန်ထမ်းကဒီအမှားကို မတော်တဆလုပ်မိတာလား ? အလျင်လိုလို. လွဲချော်သွားတာမျိုးလားစသဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပြီးမှ ဆုံးမပြောဆိုဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို. ကိုယ်ကအရှက်ခွဲပြောဆိုမိလိုက်တဲ့အခါမှာ နောက်ပိုင်းကိုယ့်ဝန်ထမ်းက ကိုယ့်ကိုသည်းမခံနိုင်လွန်းပြီးပြန်စော်ကားပြောဆိုတာမျိုး မလိုလားအပ်တာတွေပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၃။ မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်မပေးတဲ့အကျင့်
- အကြီးအကဲတိုင်းကတော့ ကိုယ့်လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိနားလည်ထားရအောင် လေ့လာအကဲခတ်လေ့ရှိကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး ဘာလုပ်လုပ်ဘာကိုင်ကိုင်စောင့်ကြည့်စပ်စုနေတာမျိုး၊ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပါကျော်ပြီး ၀င်စွက်ဖက်အကဲခတ်နေတာမျိုးကတော့ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဲ့လိုလုပ်တာကြာလာရင် ၀န်ထမ်းက အလုပ်မှာနေရတာ သက်တောင့်သက်သာမရှိ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခံစားမှုမျိုးမရတော့ဘဲ ငါတို.မန်နေဂျာကတစ်မျိုးကြီးပဲ လို.တွေးထင်စိတ်ရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
- အကောင်းဆုံးတွေလုပ်ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ပြနေတာတောင် ၀န်ထမ်းကို အကောင်းမပြော အသိအမှတ်ပြုမှုမပြတဲ့အခါမှာ ၀န်ထမ်းအနေနဲ.လည်း အကောင်းဆုံးပဲစွမ်းဆောင်ပြပြ၊ အလုပ်ကြိုးစားမှုပဲလျော့ကျနေနေဘာမှမထူးခြားလာလောက်ပါဘူးဆိုပြီး အလုပ်အပေါ်ကြိုးစားချင်စိတ်တွေလျော့ကျလာနိုင်ပါတယ်။
- ဘယ်လောက်မြင့်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ အကြီးအကဲပဲဖြစ်နေပါစေ၊ အရေးကိစ္စအကုန်လုံးတော့မဆောင်ရွက်နိုင်ပါဘူး။ တခါတလေ ကိုယ်မသိတဲ့ကိစ္စအချို. ကိုယ့်လက်အောက်ဝန်ထမ်းက သိနေတဲ့အခါမျိုးမှာ မေးမြန်းရမှာကိုရှက်နေကြောက်နေပြီး ကိုယ်ကပဲအတော်ဆုံးအတတ်ဆုံး ကိုယ်ကပဲအရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် သိကျွမ်းတတ်မြောက်သလိုဖြစ်ချင်နေတဲ့အခါ အလုပ်မတွင်ကျယ်တော့ပါဘူး။ အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ တချို.လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ သိကျွမ်းနားလည်တဲ့ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားကို ကိုယ်ကတာဝန်ခွဲပေးတာမျိုးမရှိတော့ဘဲ ၀န်ထမ်းကလည်း ငါလုပ်နိုင်တယ် ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုမလုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက် လုပ်မပေးတော့ဘူး။ ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါနဲ.လည်းမဆိုင်တော့ဘူးလို. လက်လွတ်စပယ်နေတတ်သွားပါမယ်။
- လက်အောက်က၀န်ထမ်းတွေပြောတဲ့စကားကိုအရင်နားထောင်မပေးဘဲ သူတို.တွေမှာလုပ်စရာအလုပ်တွေရှိတယ်။ အဲ့တော့ငါပြောတာပဲသူတို.နားထောင်၊ ပြီးရင်သူတို.အလုပ်သူတို.ပြီးအောင်ဆက်လုပ်ကြရမယ်လို. တဖက်သတ်ကြီးစည်းကမ်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့ လုပ်ငန်းပိုင်းမှာ ပိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာမရှိတော့ဘဲ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုက ဒီနေရာတစ်ခုထဲမှာပဲတန်.နေပါတော့တယ်။ ပိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ဖို. ၀န်ထမ်းတွေရဲ.ပြသနာအကြောင်းအရာတွေကို နားထောင်ပေးခြင်းမှ မရှိတဲ့အခါမှာ ၀န်ထမ်းတွေကလည်းကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ပါဘူး။
- အခက်ခဲဆုံးနဲ. အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကတော့ စည်းကမ်းချမှတ်ပေးရတာပါပဲ။ ကိုယ့်လက်အောက်က ၀န်ထမ်းအမျိုးအစားအားလုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့် စည်းကမ်းမျိုးချမှတ်နိုင်ဖို.ကအဓိကကျပါတယ်။ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာတဲ့သူရှိနေတာကိုသိလျက်နဲ. ကိုယ့်ဘက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတာမျိုးမရှိရင် ဒီလုပ်ငန်းကြီးကဘယ်လိုမှအကျိုးမဖြစ်ထွန်း စည်းစနစ်မကျနိုင်တော့ပါဘူး။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/26/2015 08:50:00 AM